Nsuku zonke, inkinga wokonga ugesi isiba acute ngaphezulu, ngoba lihlotshaniswa kokubili ezicashile kwemvelo, kanye zezimali. Vele ambalwa eminyaka adlule, amandla kwaba ezishibhile ngokwanele, futhi akekho owacabanga mayelana nendlela onge amandla ekhaya. Kodwa manje njalo ngonyaka izikweletu ugesi ayabaluleka umxhwele nakakhulu, elenza ukuthatha izinyathelo ezinqala. Ziningi izindlela ukonga ugesi ekhaya, bathembele ngokuphelele ezintweni izimo zokuphila futhi ukutholakala izinto zikagesi.
Ekhishini ingenye yezindawo eyinhloko ukusetshenziswa kukagesi, ngoba manje abaningi babo bangabantu kettles hhayi kuphela kagesi, kodwa futhi isitofu, ngaphandle microwave Ohhavini, izilimi ukudla, amafriji, Amathosta, futhi imishini ngezinye izikhathi ukugeza. Ukuze umelane nakho, kudingeka alandele imithetho ayinzima yomnotho. Okokuqala, i-pan noma casserole kumele ncamashi ukufanisa Usayizi izitofu, ngaphezu, kufanele embozwe ngesivalo - kuyoba umsebenzi usheshe ukupheka.
Uma imikhiqizo uthathe yizicucu amancane, babehlale ukupheka ngokushesha. A umsizi omuhle ukuthi kukusiza uqonde ukuthi kudingeka onge amandla ekhaya, kuyinto kubhayela double, okuyothi ungakwazi ukupheka izitsha eziningana ngesikhathi esisodwa. UMenzi zigezwe kusukela esikalini njalo, hhayi babeyivakashela ngankathi. Igcina ugesi ekhishini ibuye izuzwe ngosizo namanye amadivayisi eziningi zanamuhla - the Fryer, ingcindezi cooker, into yokucocobalisa, Multivarki ukuthi kuphephe ukusebenzisa futhi asidingi imali eshisiwe zamandla. Uma ukuthenga isitofu entsha, kuhle ukucabangela phezu inketho exhasa, njengoba amadivayisi abanjalo bangabaphostoli kulula ukusebenza, namandla ukusetshenziswa ngesikhathi esifanayo - kancane. Ukuze reheat ukusebenzisa kangcono microwave Ohhavini, okuyinto kakade imizuzu embalwa kungaba ukudla okumnandi efudumele, kuyilapho ipuleti abavamile phakathi nalesi sikhathi ngisho wayengenayo isikhathi ukuxoxa.
Yiqiniso, zonke izindlela kwagezi izindlela kanye efanele inhlangano ukukhanyisa. kunconywa ukusebenzisa energy esisindisa light isibani, okungukufa ethile eyinhloko amanani entengo aphezulu, yize isikhathi yomsebenzi wabo eside ukuze emithonjeni efana ukukhanya isikhathi ukuze asule usebenza ngokugcwele ngaphakathi endlini. Ukuza aphume ekamelweni, udinga ukuvala izibani, ngisho ushiye indawo emva kwamaminithi ambalwa. Uma lesi seluleko njalo ukhohlwe, kuwufanele ukutshala motion izinzwa (okuyinto nazo ngempumelelo e lemigubazi), vula izibani kuphela uma egumbini kukhona izimpawu womsebenzi. On TV ne-computer kuyinto efiselekayo ukusebenzisa ekuvaleni yephuza isikhathi eside ze-non-ukusetshenziswa.
Uma izindlu efakwe uhlelo engaziwa Ukushisa, ukuze uqonde ukuthi kudingeka onge amandla ekhaya, kufanele wazi ukuthi lusebenza kahle kanjani futhi ophethe ke. ukonga kakhulu obonwa uhlelo "phansi efudumele", eqinisweni imilenze kuthiwa umnkantsha umuntu endaweni yokuqala. ukufudumala acekelwa phansi ikwenza ucabange ukuthi emoyeni ezungeze efudumele kakhulu futhi, ngokufanelekile, ukunciphisa ekamelweni lokushisa yayo usebenzisa thermostat. Kuyinto uyelulekwa hhayi ukusebenzisa amanzi ashisayo kusukela ezisemadolobheni amanzi ompompi, futhi shisisa ke wena kubhayela kagesi, ukuthi Kuyophumela ethubeni ishibhile. Ngisho ebusika obubanda akudingekile ukufudumeza ubusuku bonke - ngoba ngaphansi nesembozo nokushisa ugesi uzobe esichithekayo.
Ukusiza ukuqonda ukuthi kudingeka onge amandla ekhaya kungakusiza futhi imiyalo evamile ngoba izinto zikagesi. Ngokuvamile, lapho icaciswe mode ezifanele kakhulu okusebenzela kuyo imishini, kodwa kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi esitolo udinga ukukhetha imishini kuphela "A" chungechunge, okhombisa ngezinga eliphakeme ka ekusetjentisweni kwemandla ngalokuyimphumelelo. Yiqiniso, le ndlela kuyabiza, kodwa ke akudingeki overpay.
Umlando Geological: umjikelezo phosphorus ngokwemvelo
Amagciwane Coliform emanzini. coliforms Thermotolerant
"Mona" ehhotela Boutique - iholide emangalisayo ngesikhathi intengo imali
Uhlolojikelele-headphone Panasonic RP HJE125
Medicine "Omacor ': ukubuyekezwa nezenhliziyo, imiyalelo, intengo
Ukudla Ukukhanya okusheshayo kwesisindo - liphinde esihlwabusayo
-USB drive SanDisk Cruzer Blade: Ukucaciswa, ukubuyekezwa